ကို USB DRIVE ကနေ HARD DRIVE ကိုအောင်လုပ်နည်း - HARD DISK ကို - 2019
ကို USB drive ကနေ hard drive ကိုအောင်လုပ်နည်း
သင်သည်သင်၏ hard drive ကိုအပေါ်အလုံအလောက်နေရာလွတ်ရှိသည်, နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်ပါဘူးတဲ့အခါမှာသူကအလုပ်မလုပ်ပါဘူး, ငါတို့အသစ်ကဖိုင်တွေနဲ့ဒေတာအတွက်သိုလှောင်မှုအာကာသတိုးမြှင့်ဖို့အမျိုးမျိုးသော options များထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ရှိသည်။ အရိုးရှင်းဆုံးနှင့်အများဆုံးသုံးစွဲနိုင်နည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခု hard disk ကိုအဖြစ်ကို flash-drive ကိုသုံးစွဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ချောင်းကိုအလတ်စားအသံအတိုးအကျယ်အများအပြားမှာရရှိနိုင်ဖြစ်တယ်, ဒါသူတို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကို USB ကနေတဆင့်သင့်ရဲ့ PC မှာသို့မဟုတ် Laptop ကိုချိတ်ဆက်ထားတဲ့အပိုဆောင်းသိုလှောင်မှုစက်ပစ္စည်းအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ကို USB drive ကနေ hard disk ကို Creating
သမားရိုးကျ flash drive ကိုပြင်ပခရီးဆောင် device ကိုအဖြစ်စနစ်ဖြင့်ရိပ်မိသည်။ Windows ကိုအခြား hard drive ကိုချိတ်ဆက်မြင်ရပါလိမ့်မည်သို့မှသာဒါပေမယ့်အလွယ်တကူ drive ကိုစဖွင့်နိုင်ပါတယ်။
အနာဂတျမှာက operating system ကို install လုပ်ဖို့ဖြစ်နိုင် (optional ကိုကို Windows, သငျသညျ, ဥပမာ, Linux ကိုအပေါ်အခြေခံပြီး "အလင်း" option ကိုထက်ပိုပြီးအကြားရှေးခယျြနိုငျသညျ), နှင့်သင်ပုံမှန် drive ကိုပြုသဖြင့်, သောသူအပေါင်းတို့သည်အတူတူပင်လုပ်ရပ်များလုပ်ဆောင်။
ဒါကြောင့်ကျနော်တို့အနေနဲ့ external HDD သို့က USB Flash ကိုပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်စဉ်မှလှည့်။
အချို့ကိစ္စများတွင်အောက်ပါလုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးလုပ်နေပြီးနောက် (နှစ်ဦးစလုံးအတွက် Windows bit) သင်ချောင်းကိုပြန်လည်ချိတ်ဆက်ဖို့လိုအပ်လိမ့်မည်။ ပထမဦးစွာကို USB-drive ကို၏ဘေးကင်းလုံခြုံဖယ်ရှားရေးကိုလိုက်နာ, ပြီးတော့တစ်ဦး HDD အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုသည့် operating system ကိုမှပြန်ချိတ်ဆက်ပါ။
Windows ကို x64 (64-bit) များအတွက်
F2Dx1.rar Download နှင့်ဇီပ်။
ကို USB flash drive ကိုနှင့်ပြေးချိတ်ဆက်ပါ "Device Manager"။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ရိုးရှင်းစွာအတွက် utility ကို၏အမည်ကိုရိုက်ထည့်စတင်ရန် "Start".
ဒါမှမဟုတ်ညာဘက်အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Start" ကို select "Device Manager".
ဌာနခွဲ "Disk Drives" ယင်းချိတ်ဆက် flash ကို-drive ကို select လုပ်ပါ, နှစ်ကြိမ် left mouse ကိုခလုတ်တစ်ခုကိုကလစ်နှိပ်ပါ - Start ကို "Properties ကို".
tab ကိုသို့ပြောင်းရန် "Information" ဆိုတဲ့ နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု၏တန်ဖိုး copy "ID ကိုသုံးစက်ကိရိယာများ"။ Copy ကူးမျဉ်းကြောင်းမှပေမယ့်ဘာမှမလိုအပ်ပါဘူး USBSTOR GenDisk။ ကို Select လုပ်ပါလိုင်းကီးဘုတ်ပေါ်ကို Ctrl ကိုဖိထားပြီးလိုချင်သောလိုင်းပေါ်တွင်လက်ဝဲဘက် mouse ကိုခလုတ်နှိပ်ခြင်းအားနိုင်ပါတယ်။
ဖိုင် F2Dx1.inf ဒေါင်းဖိုင်မှကို Notepad သုံးပြီးဖွင့်သင့်ပါတယ်။ ဒီအလုပျညာဘက်မောက်စ်ခလုတ်ကိုကလစ်ရွေးဖို့ "နဲ့ဖွင့်ပါ ... ".
ဒါကြောင့်ပထမလေးတန်း (r ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်လိုအပ်လို့ပဲ။ အက်ဖ်လိုင်းတက်% Attach_drv% = f2d_install, USBSTOR GenDisk).
မှကူးယူထားပြီးကြောင်းတန်ဖိုးကို Paste "Device Manager"အဲဒီအစားဖျက်ပစ်စာသား။
% Attach_drv% = f2d_install,
သို့ပြောင်းရန် "Device Manager", ညာ, အကို flash-drive ပေါ်တွင် click လုပ်ကို select "ယာဉ်မောင်းဆော့ဝဲကိုအပ်ဒိတ်လုပ် ... ".
method ကိုအသုံးပြု "ယာဉ်မောင်းဆော့ဖ်ဝဲကွန်ပျူတာရှာရန်".
အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်" နှင့် edited ဖိုင်၏တည်နေရာကိုသတ်မှတ် F2Dx1.inf.
ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သင့်ရည်ရွယ်ချက်များကိုအတည်ပြု "တပ်ဆင်ခ Continue".
တပ်ဆင်ပြီးနောက်, ပြည့်စုံသည့် flash ကို "(X ကို :) Local Disk" (အစား X ကို၏ system အတွက် drive ကိုစာတစ်စောင်ဖြစ်ပါသည်) အဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာ Windows Explorer ကိုဖွင့်သည်။
Windows ကို x86 (32-bit) များအတွက်
Hitachi_Microdrive.rar Download နှင့်ဇီပ်။
အထက်ညွှန်ကြားချက်ကနေ 2-3 ခြေလှမ်းများကိုလိုက်နာပါ။
အဆိုပါ tab ကို Select လုပ်ပါ "Information" ဆိုတဲ့ နှင့်လယ်ပြင်၌ "အိမ်ခြံမြေ" အဆိုပါ set "ဟုအဆိုပါ device ကိုဥပမာအားဖြင့်ရန်လမ်းကြောင်းကို"။ လယ်ပြင်၌ "Value ကို" အဆိုပါပြသ string ကိုကော်ပီကူး။
ဖိုင် cfadisk.inf ဒေါင်းဖိုင်မှကို Notepad ဖွင့်လှစ်သင့်ပါတယ်။ ဒီလိုဆောင်ရွက်ဖို့ကိုဘယ်လို - ကအထက်ညွှန်ကြားချက်၏ခြေလှမ်း5၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ဖြစ်ပါတယ်။
% Microdrive_devdesc% = cfadisk_install, USBSTORDISK & VEN_ & PROD_USB_DISK_2.0 & REV_P
လိုက်ကြောင်းဘာမှ Remove install လုပ်, (အဆိုပါအဆုံးစွန်သောအဘယ်သူမျှမနေရာတစ်ကော်မာဖြစ်သင့်) ။ ကနေကူးယူကြောင်း Insert "Device Manager".
အဆိုပါ paste လုပ်ထားတဲ့တန်ဖိုးများ၏အဆုံး Remove, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ဘဲနောက်ကြွလာအရာအားလုံးကို REV_XHXX.
သင်တို့သည်လည်းသွားခြင်းအားဖြင့်ကို USB drive ကို၏အမည်ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်
နှင့်တတန်းအတွက် quotation သင်္ကေတအတွက်တန်ဖိုးပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်
အဆိုပါ edited file ကို Save နှင့်အထက်ညွှန်ကြားချက်များ၏ခြေလှမ်းများ 10-14 လိုက်နာပါ။
ထို့နောက်သင် flash ကိုကဏ္ဍများအပေါ်ခွဲနိုင်ပါတယ်ပေါ်မှာကကနေ operating system နဲ့ Boot တက်တပ်ဆင်ထားအဖြစ်ပုံမှန် hard drive ကိုကဲ့သို့, အခြားအမှုအရာတို့ကိုကျင့်။
ဒီသာသင်တို့ရှိသမျှသည်အထက်ပါအဆင့်များပြီးစီးသောပေါ်မှစနစ်ဖြင့်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်သတိပြုပါ။ ဒါကယာဉ်မောင်းချိတ်ဆက် drive ကို၏အသိအမှတ်ပြုမှုတာဝန်ခံ, အစားထိုးခဲ့ပြီးဆိုတဲ့အချက်ကိုကြောင့်ဖြစ်သည်။
သငျသညျဖိုင်-ကားမောင်းသူ edited ခံရဖို့လိုအပ်အတူတစ် HDD နှင့်အခြား PC ကိုအဖြစ်ကို USB flash drive ကို run ပါ, အဲဒီနောက်သူကဆောင်းပါးထဲမှာဖော်ပြထားခဲ့တူညီသောလမ်းရှိ "Device Manager" မှတဆင့်တပ်ဆင်ချင်တယ်ဆိုရင်။
ဗီဒီယို Watch: usb ကန ဝငဒ တငခငသမအတက လ လ ဖ ပ (သြဂုတ်လ 2019).